Kushone 1 kwalimala 7 engozini eThekwini | News24
Kushone 1 kwalimala 7 engozini eThekwini
Durban - Kushone umuntu oyedwa kwathi abayisikhombisa balimala ngesikhathi kwehla ingozi ebandakanya izimoto ezine ku-N3 ngasePinetown, kusho abosizo lokuqala ngoLwesithathu.
Okhulumela iNetcare 911 uChris Botha uthe le ngozi yenzeke ngasemgwaqeni ochezukela kuSt John’s Road ngaphambi kokushaya kwehora lesikhombisa ekuseni.
OLUNYE UDABA: Kushone 9 engozini yomgwaqo
Uthi umbiko ohlanganiswe endaweni yesigameko uveza ukuthi iveni ebilibangise eThekwini iphaphalaze yaphuma emgwaqeni yashayisa imoto ebiza ngeneno.
Kuthiwa ezinye izimoto ezimbili zibe sezishayisa ezinye.
Oshonile ubengumshayeli weveni kanti abanye babalimele yizingane zesikole, kusho owe-EMS uRobert Mckenzie.
Abalimele baphuthunyiswe esibhedlela.